Su'aalaha La Weydiiyo - Yixing City Jitai Electronics Co., Ltd.
Qiimaheena waxay ku kala duwan yihiin hadba waxyaabaha loo isticmaalo, kakanaanta naqshadeynta / soosaarka, iyo tirada. Maaddaama inta badan badeecadeenna la qaabeeyey, waxaan la shaqeynaa sawirro macmiil ah si aan u siino xigashooyin gaar ah sida ugu dhakhsaha badan.
Maya, ma jiraan tiro ugu yar oo amar ah. Si kastaba ha noqotee, maaddaama inta badan alaabteenna la qaabeeyey, inta badan waxaa jira lacag-bixin qalab oo la xiriirta soo-saarista nooc cusub oo soo-saar ah, tusaale ahaan caaryado caado u ah waa in la sameeyaa iwm.. Xaddiga dalabyada aadka u yar, tani waxay caddayn kartaa kharash-ka-mamnuuca macaamiisha qaarkood.
Qiyaas ahaan hadalkayga, 6-8 toddobaad waxay kuxirantahay kakanaanta mashruuca
Hadda waxaan aqbalnaa oo keliya wareejinta bangiga. Guud ahaan waxaan codsaneynaa 30% T / T lacag bixinta hore ee meelaynta dalabka, iyada oo 70% soo hartay ay sabab u tahay rarka.
Haa, waxaan isticmaalnaa baakadaha dhoofinta oo tayo sare leh. Waxaan sidoo kale u adeegsannaa xirxirida halista khaaska ah alaabooyinka halista ah iyo xaqiijinta rakibayaasha qaboojiyaha ee alaabta xasaasiga ah. Baakadaha takhasuska leh iyo shuruudaha aan caadiga ahayn ee xirmooyinka ayaa laga yaabaa inay qaadaan lacag dheeraad ah.
Khidmadaha rarku way kala duwan yihiin waxayna kuxirantahay hadba nooca ay macaamiisha shirkada geynayso ay doortaan. Waxaan la shaqeynaa dhammaan rarka waaweyn ee ajaanibta iyo kuwa gudaha. Fadlan nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.